एउटा आलुले ४० दिनसम्म बत्ति बाल्न सकिन्छ !
एजेन्सी। के घरमा बत्ति बाल्न विद्युत ग्रीडको सट्टा आलुको प्रयोग सम्भव छ?
अनुसन्धानकर्ता राबिनोविच र उनका सहयोगी अघिल्ला केही वर्षदेखि यसैलाई प्रोत्साहित गर्दै छन।
बीबीसीमा छापिएको एक रिपोर्टजेरुशेलमको हिब्रु युनिभर्सिटीका राबिनोविच दाबी गर्छन्, ‘एउटा आलुले एलईडी बल्ब ४० दिनसम्म बाल्न सक्छ।’
आलुमाथी अध्ययनसन् २०१० मा, राबिनोविचले क्यालिफोर्निया यूनिभर्सिटीका एलेक्स गोल्डबर्ग र बोरिस रुबिस्कीसंग यो बारेमा एक कोसिस गर्ने सोचे। गोल्डबर्ग भन्छन्, ‘हामीले २० अलग-अलग तरिकाको आलुको आन्तरिक प्रतिरोधको जाँच गर्यौं।’
केराको बोक्रासायद यहि कारणले पनि श्रीलंकाको केलानिया यूनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताले केराको बोक्रामाथी पनि प्रयोग गर्दैछन्।
भौतिक वैज्ञानिक जयसूर्या र उनको समुहले केराको बोक्रा उमाल्दा पनि एक एलईडी बत्ति ५०० घण्टासम्म बल्ने बताउँछन्। यसरी उर्जा अन्य फलबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। यसरी निकालिएको विद्युत निकै थोरै भएपनि एलईडी बत्ति बल्न भने उर्जा पुग्छ।
तर उर्जाको वास्तविक स्रोत आलु वा केराको बोक्रा भने होइन ।
जिङ्क निकै सस्तो धातु हो। र यसको इलेक्ट्रोड करिब ५ महिनासम्म चल्छ। मूल्य तुलना गर्दा एक लिटर मट्टितेल भन्दा जिङ्कको पाता सस्तो पर्न आउँछ।
यदि जिङ्क उपलब्ध छैन भने म्याग्नशियम वा फलाम पनि विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।-नेपाल हेडलाइनको सहयोगमा